Hevi-diso momba ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Alatsinainy, Novambra 2, 2009 Alatsinainy 8 Febroary 2016 Douglas Karr
Mety ho famerimberenana ity… fa tena mila manantitrantitra izany aho. Nahita orinasa maromaro tafintohina tamin'ny paikadin'ny media sosialy aho. Nilaozan'izy ireo tanteraka izany tamin'ny farany. Ny fanontaniana tsy zakako hamaly azy ireo dia ny antony nanandramany voalohany?
Tiako ny mieritreritra ny haino aman-jery sosialy ho toy ny fanamafisam-peo… an mampino fanamafisam-peo mahery. Raha manana fototra mafy orina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe sy ny varotra ianao ary manarona ny fahazoana sy ny fihazonana am-pahombiazana, dia hisongadina ny asanao lehibe rehefa manomboka miditra an-tsehatra ianao ary manangana laza eo amin'ny Internet. Raha manana tetikady PR sy Marketing tsy misy antonony ianao dia mety hanimba azy ny haino aman-jery sosialy.
Ireo angano 5 momba ny varotra haino aman-jery sosialy
Misolo tranonkala iray ny media sosialy. Mbola mila toerana fakana sary ianao ary hisarika ny saina amin'ireo vokatra na serivisin'ny orinasanao.
Ny media sosialy dia misolo ny marketing amin'ny mailaka. Ny mailaka dia a hanoto fomba izay mampahafantatra ny mpanjifa sy ny vinavinany rehefa mila azy ireo ianao. Raha ny marina dia mitaky fifandraisana amin'ny mailaka bebe kokoa ny Social Media mba hiverenan'ireo mpampiasa tranonkala sosialy hiverina. Eritrereto ny mailaka rehetra azonao avy amin'ny LinkedIn, Facebook, ary Twitter!
Ny fampiasan'ny haino aman-jery sosialy avo lenta dia midika hoe toerana tsara hanaovana doka. Ny media sosialy dia tsy zavatra manipy doka eo ambony, zavatra ampitaina avy ao anaty izany. Orinasa betsaka loatra no mandatsaka vola amin'ny doka amin'ny sora-baventy sy dokambarotra an-tsoratra amin'ny tranokala media sosialy izay tsy tian'ireo mpampiasa hividy mihitsy.
Tsy azo refesina ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy. Fiantraikany amin'ny media sosialy afaka refesina, sarotra kokoa ny mandrefy ny fiantraikany. Mila mampiasa a ianao matanjaka Analytics fonosana - angamba miaraka amina fampidirana haino aman-jery sosialy, na fantaro ny fomba fametrahana ny kaody amin'ny fomba mahomby amin'ny ankehitriny misy anao Analytics fonosana hisamborana fitarihana sy fanovana avy amin'ny media sosialy.
Tsotra ny media sosialy, ianao fotsiny ataovy izany. NO! Tsy tsotra ny media sosialy. Alao an-tsaina izany hoe any amin'ny fiaraha-misakafo atoandro izany ary miresaka momba ny vokatrao sy ny serivisinao amin'ny fanantenana. Mitsiky izy, mitsiky ianao, mametraka fanontaniana, lazainao tsara ny valiny rehetra… mandoa sakafo atoandro ianao… azonao ny fitokisany. An-tserasera, tsy hitanao akory ny fahatongavan'izy ireo, tsy fantatrao hoe taiza izy ireo, tsy fantatrao hafa ankoatry ny hoe mety manam-pahalalana bebe kokoa noho ianao izy ireo.
Ny haino aman-jery sosialy dia manangana fifampitokisana amin'ny olona izay mety tsy mbola hitanao. Sarotra izany, mila fotoana… marathon fa tsy haingam-pandeha. Tsy mahomby amin'ny orinasa maro ny haino aman-jery sosialy satria manao ambanin-javatra ny loharano sy ny fotoana ilaina hananganana ny momentum. Tsy fantatr'izy ireo fa fampiasam-bola maharitra, fa tsy paikady fohy.
Miaraka amin'ny tetika iray dia afaka mipoaka ny vavahady ianao ary mampitombo ny orinasanao mihoatra ny antenaina. Raha tsy misy izany dia mety hitifitra ianao rehefa manipy ilay lamba famaohana.
Izany no antony mety hahombiazan'ny Southwest Airlines sy Zappos amin'ny Social Media, fa ny United Airlines sy DSW kosa tsy mahomby. Southwest Airlines sy Zappos dia orinasa mahafinaritra mifantoka amin'ny mpanjifa alohan'ny nivoatra hatreto ny media sosialy. United Airlines dia mety tsy ho afaka handray paikady media sosialy mihitsy rehefa nomena ny fitarihana ara-dalàna sy tsy mendrika.
Amin'ny maha panelista anao anio ao amin'ny Real Estate BarCamp Indianapolis, dia azonao atao ny mahita ny isan'ireo masoivoho sy broker ao amin'ilay efitrano. Ny sasany, toa ny namana tsara sy ny mpanjifa Paula Henry (izy roa Roundpeg ary DK New Media Ampio izy), mihazakazaka lavitra lavitra noho izay, ka nofoanan'izy ireo tokoa ny haino aman-jery nentin-drazana rehetra ary amin'ny Internet tanteraka. Ny olan'i Paula dia tsia ny fomba hahazoana fitarihana… Ny fomba hitazomana ny paikadiny amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny hafainganam-pandehan'izy io mandritra ny asany rehetra.
Ny sasany tao amin'ny efitrano dia mbola niasa tao ambadiky ny fiolahana… tsy misy twitter, tsy misy facebook, tsy misy olona an-tserasera, tsy misy fanatsarana motera fikarohana, tsy misy fitorahana bilaogy sns. mialoha ny fotoana handehanan'izy ireo miditra amin'ny paikadin'ny Media Sosialy raha ny fahitako azy.
Ireo vao tonga dia mila mianatra mandeha an-tongotra alohan'ny handehanany. Mila tranokala mahomby izy ireo izay afaka mahasarika ny fifamoivoizana ary manome fampahalalana momba ny fifandraisana hifandraisana amin'ny mpivarotra. Mila mikaroka sy mampiasa teny lakile izay misy fiatraikany amin'ny faritra tompoin'izy ireo izy ireo - ao anatin'izany mpifanolo-bodirindrina, kaody zip, tanàn-dehibe, distrika, distrikan'ny sekoly, sns. Izy ireo dia mila mampiasa mailaka mailaka mba hifandraisana hatrany amin'ny lead sy ny mpanjifa teo aloha. Mila miparitaka izy ireo Vahaolana finday hanoloana ny flier dia mitazona eo alohan'ireo fananana hatrany izy ireo.
Ny haino aman-jery sosialy dia afaka manome fitarihana marobe tsy mampino ao amin'ny fantsom-pivarotanao… fa tsy maintsy apetrakao ny fantsom-pivarotana, mandrefy ny vokatry ny valiny, ary miasa tsy tapaka ny programa marketing anao hikolokoloana sy hisamborana mpitarika sy mpanjifa. Avy eo ny media sosialy… manamafy ny programa marketing mahomby ary manomboka mihetsiketsika rehefa mihalehibe ny fahefana sy ny mangarahara.
Tags: mailaka Marketinganganohaino aman-jery sosialySocial Media Marketingangano media sosialy
3 Nov 2009 amin'ny 10:03 maraina
Salama Doug, lahatsoratra tsara.
Betsaka ny olona no mila manaitra ny angano "Social Media is a Cakewalk". Izaho irery no mpandray an-tanana vao haingana tao amin'ny birao, ary ny isan'ny fotoana nangatahan'ny mpitantana ahy mba "hampianatra azy ireo hampiasa Twitter tsara" ao anatin'ny adiny iray na roa dia gaga aho. Ireo zavatra ireo dia mitaky fotoana, fanoloran-tena ary faniriana hianatra. Mila fanamboarana haingana fotsiny ny olona amin'ny SM, satria mihevitra izy ireo fa fomba haingana ahazoana vola. Tena tsy izany, ary mila mianatra amin'ny fanaovana ianao.
4 Nov 2009 amin'ny 4:04 maraina
Tsara izany, Andrew! Rehefa miteny ny olona hoe "ampianaro hampiasa azy tsara aho", indraindray midika hoe… "ahoana no hanararaotantsika an'ity teknolojia ity ho tombontsoantsika manokana". Mihazakazaka aho… mikiakiaka! 🙂
3 Nov 2009 tamin'ny 1:27 PM
Lahatsoratra mahafinaritra, misaotra betsaka. Tao amin'ny biraoko dia nisy fisavoritahana be momba ny lafiny sasany amin'ny media sosialy, handefa mailaka an'ity manodidina ny birao aho!
4 Nov 2009 amin'ny 4:03 maraina
Misaotra Joe! Raha mila mihady lalindalina kokoa ny biraonao dia izay DK New Media no! Ampahafantaro ahy raha afaka manampy izahay.
3 Nov 2009 tamin'ny 4:53 PM
@douglaskarr Mamelombelona ny hevitrao, indrindra ny tifitra fisarahana nataonao izay tsy ny olon-drehetra no vonona handray anjara amin'ny SM. Mazava ho azy, ireo izay mahita ny tambajotra SM ho toerana iray hafa handefasana hafatra momba ny dokambarotra dia mamadika ny tsy fahampian'ny fahazoana ny hevitr'ireo tambajotra ireo, mamorona fitaovana ho an'ny tetikady ara-barotra na marketing.
4 Nov 2009 amin'ny 4:02 maraina
Misaotra betsaka Scubagirl15! Manomboka amin'ny paikady izany rehetra izany… ny teknolojia vao tokony ampiharina AOKA voafaritra ny tanjona rehetra. Betsaka ny haino aman-jery sosialy no tia manandrana maka media sosialy sy mampifanaraka azy amin'ny olana rehetra ananan'ny orinasa iray. Mankasitraka ny fanamarihana tsara nataonao!
4 Nov 2009 amin'ny 3:46 maraina
Mila miverina amin'ny lalao marketing ara-tsosialy aho. Miova be isan'andro ny raharaha. Ireo fomba rehetra nampiasaiko taloha dia toa tsy mandaitra intsony. Fa ianao kosa dia nahita zavatra vitsivitsy mbola tsy noeritreretiko hatrizay, ary tiako izany! Tsy maintsy averiko amin'ny laoniny ny vodin-tanako ary araraotiko tsy ho ela ny marketing sosialy!
4 Nov 2009 amin'ny 4:07 maraina
Aza manahy be loatra sao very hery. Mbola eo am-piandohan'ny andro andrefan'ny marketing ara-tsosialy ary mila mianatra zavatra betsaka isika. Makà tanjona vitsivitsy aloha, manamboara paikady… ary raha afaka mitana andraikitra ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy ary manana ROI tsara omena ny loharanon-karena… dia tadiavo izany!
4 Nov 2009 tamin'ny 1:15 PM
Toy ny mahazatra… torohevitra tsara, fahitana amin'ny fihetsika tsara! Misaotra Doug!